As of Sat, 15 Aug, 2020 22:50
श्रीलालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीलाई नेपाली कांग्रेसले वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागको सचिव पदमा मनोनयन गरेको छ । दुई दशकदेखि सहकारी क्षेत्रको विकासमा लाग्नुभएका भण्डारीको लामो समय सम्मको योगदानलाई कदर गर्दै नेपाली कांग्रेसले सचिवमा नियुक्ति गरेको हो ।
सिद्घार्थ बैंक लिमिटेडले कोरोना भाइरसविरुद्धको उपचाका लागि दुई करोड सतसट्ठी लाख सत्ताइस हजार नौ सय उनन्तिस रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत उक्त रकम सरकारले स्थापना गरेको कोषलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
ज्योति विकास बैंकले आफ्नो १२औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई ८ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीचन्द्र भट्ट र केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष डा. महावीर पुनले हस्ताक्षर गरेका हुन् । बैंकले संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत रहेको विकास प्रवद्र्धधन कोषमार्फत सो रकम दिने गरी सम्झौता गरेको हो ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र क्वेस्ट इन्टरनेशनल कलेजबीच वित्तीय क्षेत्रलाई आवश्यक मानव स्रोत उत्पादन गर्ने विषयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ र क्वेस्ट इन्टरनेशनल कलेजका अध्यक्ष कोलिन किरण श्रेष्ठले सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साधारण सयरको बिक्री प्रबन्धक तथा सेयर रजिष्ट्रारमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्गलाई नियुक्त गरेको छ । संस्थाले प्रतिसेयर एक सय रुपैयाँका दरले तीन करोड रुपैयाँको ३ लाख कित्ता सेयर निष्कासनको तयारीमा रहेको छ ।
सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाले नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित एक सहकारीको खर्च आँफैले बेहोरेको पाइएको छ । कुनै एक सार्वजनिक संस्था र अर्काे सहकारी संस्था बीच भएको सम्झौतामा सहकारीतर्फको लागत नगरपालिकाले बेहोरेको हो । गत असारमा कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुली र श्री नमुना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडबीच भएको कृषि औजार, उपकरण खरिद गर्ने सम्झौतामा सहकारीको ३० प्रतिशत लागत नगरपालिकाले दिएको हो ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई अझ उत्कृष्ट सेवा र विशेष छुट प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेको छ । बैंकले विभिन्न प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने क्रममा नेपमेड्स अनलाइन फार्मेसी, इजी केयर अनलाइन फार्मेसी, अल्मा आर्टेस (वाच कम्पनी), बाजेको सेकुवासँग सेवा सुविधा लिँदा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने गरी सम्झौता गरेको हो ।
ऋण लगानी गर्ने सबै प्रकारका संस्थाहरू कर्जा सूचना केन्द्रको नेटवर्कमा समेटिने भएका छन् । सरकारले सर्वसाधारणसँग ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकारका संस्थाहरूलाई समेटेर कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो । कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नका लागि सरकारले छुट्टै ऐन ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साउन दोस्रो साता ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् ।
सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले साउदीस्थित सेवाग्राहीलाई लक्षित गर्दै साउदी कै इन्जाज् बैक अफ अल बिलादसँगको सहकार्यमा ‘हरेक कारोबारमा आकर्षक उपहार’ योजना ल्याएको थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी नीति–२०६९ को पुनरावलोकनमा गरिएको व्यवस्थाप्रति राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । नीतिको मस्यौदा स्पष्ट नभएको र सहकारीलाई खुम्च्याउने विषयहरु समेटिएको भन्दै संशोधनपछि मात्र पारित गर्न आग्रह गरेको हो । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार गरेको नीतिको पुनरावलोकन मस्यौदाबारे महासंघले सोमबार केन्द्रीय संघहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा बोल्ने सहकारीकर्मीले नीतिले सहकारीको भिजन देखाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरे । कार्यक्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारीको सिद्धान्त विपरित हुनेगरी नीति तय गरिएको भन्दै त्यसमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीमित कर्मचारीबाट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने भएका छन् । कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीमित कर्मचारीबाट सिफ्ट अनुसार सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो ।
ग्लोबल आईएमई बैंकले दाङको घोराहीमा नयाँ एक्स्टेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मालपोत कार्यालय, घोराहीका प्रमुख विनोदकुमार पौडेलले बैंकको ४०औं एक्स्टेन्सन काउन्टरको आइतबार उद्घाटन गरे ।
सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्देशिका जारी गरेको हो । सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सहकारी विभागले तयार गरेको निर्देशिका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको हो ।
नेपाल एसबीआई बैंकका कार्डबाहक ग्राहकले सोल्टी होटलमा विशेष छुट पाउने भएका छन् । रे ।
सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रही सञ्चालनमा रहेको सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्ड तथा सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–२ को आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ ।